देश विखण्डन हुँदै जानेछ (विचार लक्ष्मणलाल कर्ण )
राजनीति Friday, 11 September 2015 16:12	Rate this item
लक्ष्मणलाल कर्ण अग्रगामी संविधानको सपना
म ठूलो राजनीतिक मान्छे होइन । ३० वर्ष वकालत गरेँ । वरिष्ठ अधिवक्ता थिएँ । महिनाको लाखौँ आम्दानी थियो । ०६४ मा संविधानसभामा गएँ । मेरो एउटा सपना थियो, यो देशमा एउटा संविधान बन्छ, सबैले अधिकार पाउँछन् । विकासको वातावरण सुरु हुन्छ । त्यो संविधानमा मेरो पनि हस्ताक्षर भयो भने म आफूलाई धन्य ठान्नेछु ।
तर, त्यो भएन । अब त मेरो हस्ताक्षरविनाको संविधान बन्ने भयो । मेरा लागि यो अवस्था कति कठिन होला ? यो संविधानसभालाई फेल गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो दृढ इच्छा हो । दुनियाँमा जतिसुकै ठूलो समस्या आए पनि संवादबाट समाधान हुन्छ । अझै समय छ । संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छ । त्यसैले दुई महिना प्रयोग गरेर यो संविधानसभालाई सफल बनायाँै भने देशका लागि राम्रो हुनेछ । यदि त्यो गरेनौँ भने यो देश विखण्डन हुँदै जानेछ । हो, हाम्रो आवाज सानो थियो ।
हाम्रो पार्टी सानो थियो । तर, हामी एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेका थियौँ । ठूला पार्टी भनिरहेका छन्, ‘तपाईंहरूसँग जनमत कहाँ छ, त्यो त हामीसँग छ ।’ तर, यहाँ मधेसमा आएर हेरून् अहिले लडिरहेका को छन् ? कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट दिने नै आन्दोलनमा आएका छन्, लडिरहेका छन् । अब उनीहरूलाई गएको भोट फिर्ता भइसक्यो । जनताले आफ्नो भोट फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था भएको भए फिर्ता लिइसक्थे । व्यावहारिक रूपमा जनता हामीसँग फर्किसकेका छन् ।
प्राविधिक रूपमा मात्रै ठूला पार्टीसँग छन् । हामीले संविधानसभा छाडे पनि संविधान जारी गर्न आवश्यक दुईतिहाइ संख्या छँदै छ भन्ने तर्क पनि गरिन्छ । तर, संख्याले मात्रै संविधान बन्ने होइन । संख्या आवश्यक पर्छ तर गणितले मात्र संविधान बन्दैन । एकातिर संविधान बनाउने अर्कोतिर जल्ने भयो भने के गर्ने ? ०६३ मा उपेन्द्रजीलगायत केही साथीले काठमाडांैमा अन्तरिम संविधान जलाएका थिए ।
यसपटक गाउँगाउँमा, गल्लीगल्लीमा जल्छ । अनि यो संविधानको के काम ? जनताका प्रतिनिधि केवल कांग्रेस एमाले मात्रै होइनन् । हामी पनि हौँ।
यी हुन् हाम्रा माग
हामीले प्रस्ट भन्दै आएका छौँ, राज्य पुनर्संरचना गर्दा मधेसमा दुइटा प्रदेश हुनुपर्छ । नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म एउटा र चितवनको दक्षिण भागदेखि झापासम्म अर्को । मधेसीलाई दुई नम्बरको नागरिक बनाइएको छ । ०४७ देखि नागरिकताका लागि लडिरहेका छौँ, समाधान भएको छैन । नागरिकताबारे कम्तीमा अन्तरिम संविधानमा स्वीकार गरिएको त मान्नुपर्छ । राज्य सबै जनताको, सबै समुदायको हो भने राज्यको सम्पूर्ण निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
संघीय प्रदेशमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मात्रै होइन, न्यायपालिका पनि संघीय संरचनामा जानुपर्छ भन्ने हो । भाषाका कुरा पनि छन् । यी सबै मधेस आन्दोलनको पहिल्यै क्रममा भएको सम्झौतामा छन् । त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नै मुख्य माग हो । मधेसका जिल्लालाई समावेश गरेर २ नं. प्रदेश बनेकै छ नि भनिन्छ । तर, पर्सादेखि सप्तरीसम्मको जो प्रदेश बनाइएको छ, त्यो कुन सिद्धान्तमा छ ? के सुनसरी, झापा, मोरङ मधेस होइन ।
नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म मधेस होइन ? सबै मधेस हुन् भने आठ जिल्लालाई मात्रै किन मधेस प्रदेशमा राख्ने ? राज्यले मानेको मधेसलाई नै हामीले मधेस मानेका छौँ । मेरो जन्म हुँदा बुबाले मलाई मधेसी भनेको होइन, राज्यले भनेको हो । इतिहासको कुरा नगरौँ, होलीको कुरा गर्दा पनि दुई दिन बिदा हुन्छ, एक दिन पहाडीका लागि एक दिन मधेसीका लागि । जहाँ–जहाँ होलीका लागि मधेस भनेर बिदा दिइन्छ, त्यसैलाई त हामी मधेस स्वायत्त प्रदेश भनिरहेका छौँ ।
झापाका राजवंशी, गन्गाई, ताजपुरिया, मेचे, कोचे, सतारहरू सबैले हामीलाई मधेसमा राख्नुस् भनेका छन् । विराटनगरमा, सुनसरीमा मधेसमा हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन छ । ती जिल्लावासीले उत्तर दक्षिण नै ठीक छ भनेको भए किन आन्दोलन हुन्थ्यो ? मधेसमा १७ प्रतिशत पहाडी छन् । हामी पहाडी र मधेसी मिलेर बसेका छौँ । हामीले भनेको त हामी पहाडियासँगै मिलेर बस्छौँ भनेको हो नि । १७ प्रतिशत पहाडिया र अरू मधेसीलाई सँगै पो बस्न दिनुपर्ने हो, किन अलग गर्न खोजिरहेका छन् ? मधेसी र पहाडीबीच कलह फैलाउने काम त राज्यबाटै भइरहेको छ ।
हामीले यो पनि प्रस्ट भनेका छौँ, मधेस स्वायत्त प्रदेशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ । यहाँको हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
कम्तीमा अन्तरिम संविधानजति
केहीले तराईमा धेरै निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र राजनीतिक भविष्य निश्चित गर्ने स्वार्थमा बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
तर, हामीले निर्वाचन क्षेत्रबारे कुनै नयाँ कुरा गरेकै छैनौँ । अन्तरिम संविधानमा भएकै व्यवस्था होस् भनेका छौँ । अन्तरिम संविधानले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनेको छ । हामीले अन्तरिम संविधानका प्रावधान परिवर्तन नगर्नुस् भनेको हो । राज्यको क्षेत्रमा भूभाग पनि पर्छ, तर महत्त्वपूर्ण जनता हो ।
बाघभालुको त जनता हुँदैन । पहाड र जंगलको राज्य हुँदैन । राज्यपुनर्संरचना गर्दै छौँ भने ७५ जिल्ला राख्न के जरुरी छ ? जुन कुरा अन्तरिम संविधानबाट प्राप्त गरिएको छ, त्योभन्दा पछाडि फर्कने हो भने प्रतिगामी संविधान हुन्छ । हामीले निर्माण गर्न लागेको अग्रगामी संविधान हो, तर प्रतिगामी संविधानमा पुग्यौँ भने हुँदैन भनेका हौँ ।
‘दाजुभाइ’को सहयोग जायज
म सानो हुँदा मेरो घरका ५० मिटरमा भारतीय सिमाना थियो । हामी लोटामा पानी बोकेर दिसा गर्न भारततिर जान्थ्यौँ । के त्यसलाई भारतमा गएर दिसा गर्‍यो, कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने ? अहिले वीरगन्जमा मान्छे मर्दा रक्सौलको मान्छेलाई दुख्यो । रक्सौलका व्यवसायीले एक लाख उठाएर वीरगन्जका मृतक परिवारलाई सहयोग गर्ने भनेर हामीलाई बोलाए । हामी गयाँै । त्यहाँ गएर मैले भनेँ, ‘हामीबीच बेटी–रोटीको सम्बन्ध छ । त्यो कुरा देखियो ।
हाम्रो रगत बग्नेबित्तिकै तपाईंहरूलाई दुखेको रहेछ । तपाईंहरूले यो सहयोग गर्नुभयो । तर, यत्ति मात्रै सहयोगले पुग्दैन । वीरगन्जमा मात्रै पाँचजना मारिए । ७० जना बन्दुकको गोलीले घाइते बनाइएका छन् । राज्यले हामीलाई मार्दा तपाईंहरूले टुलुटुलु हेरिरहन मिल्दैन । मानवअधिकार हनन् भएको छ भने कुनै लोकतान्त्रिक देशले अर्को देशमा मानवअधिकार हनन भएको छ भनेर बोल्छ । यसलाई हस्तक्षेप मान्दैन । त्यसकारण तिम्रा सांसद छन्, उनीहरू संसद्मा बोलून् ।
केन्द्रमा पनि बोलून् । यहाँ कफ्र्यु लगाउनुमा काठमाडौं सामान लैजानेबाहेक अरू केही उद्देश्य छैन । वीरगन्जमा कफ्र्यु लगाउने, दंगा क्षेत्र बनाउने कुनै लिगल कारण छैन । प्रहरीले आफँै मान्छे मार्ने र आफँै दंगा क्षेत्र घोषणा गर्ने काम गरिरहेको छ । हामीलाई मार्न यो गरिएको छ भने हामी रोकिरहेका छौँ, तिमीहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर ।’ भारतीय भूमिमा गएर मैले यसो बोल्नु गलत थियो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
मैले बिल्कुल सही कुरा गरेको छु । मेरा दाजुभाइले मलाई सहयोग नगर्ने हो भने मलाई कसले सहयोग गर्छ ? खाली एउटा सिमानाका कारण मलाई सहयोग नगर्ने ? मैले यो देश (नेपाल) को कुनै पनि नागरिकलाई केही भनेको छैन । राज्यलाई भनिरहेको छु । सम्पूर्ण नागरिकले देश चलाइरहेको हुन्न । खास नेताले चलाइरहेको हुन्छ । जो सत्ता चलाउने खास नेता छ, उही नै हाम्रो दुश्मन हो । कफ्र्यु लगाएर, दंगा क्षेत्र घोषणा गरेर हामीलाई मारिरहेको छ भने हामीलाई मार्ने हाम्रो दुश्मन नै हो । जहाँ हाम्रो रगत मिल्छ, दाजुभाइ छन् त्यहीँ नै गुहार्न जाने हो । नेपालमा हामीले यत्तिका दिन गुहार्‍यौँ, दुई वर्ष गुहार्‍यौँ ।
मैले संवाद समितिमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर गुहारेँ । विभिन्न समितिमा, संविधानसभामा हाम्रो कुरा सुन्नुको सट्टा हामीलाई मार्छन् भने हाम्रो मानवअधिकारको रक्षा गर भनेर ‘दाजुभाइ’ लाई किन नभन्ने ? विहारका नेता डा. अनीलकुमार सिंहले त भन्नुभयो, ‘हामीले बैठक गरिसकेका छौँ, हामी पनि यो ठाउँमा गाडी रोक्ने काम गर्छौं । तपाईंको आन्दोलनले वीरगन्ज बन्द छ, हाम्रो रक्सौल आन्दोलनविना ठप्प छ । तपाईंहरू कति आक्रोशित हुनुहुन्छ थाहा छैन तर रक्सौलका सारा मान्छे आक्रोशित छन् । आक्रोशको अवस्थामा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर चाँजोपाँजो मिलाइरहेको छु । मिल्नेबित्तिकै गाडी रोक्छौँ ।’
हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटोमै छौँ । तर, यो आन्दोलन लम्बिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । जबसम्म हाम्रो अधिकार पूरा हुन्न तबसम्म जारी रहन्छ । प्रहरीको ज्यादतीका कारण जनताले केही ठाउँमा आगो लगाउँछन् । जहाँ–जहाँ गोली चलेको छ, त्यो ठाउँमा आगजनी भएको छैन । गोली चलेको ठाउँमा अश्रुग्यास पनि प्रहार भएको छैन । सीधा गोली हानेर मान्छे मारिएको छ । त्यसपछि अन्य ठाउँमा आगजनी भएका छन् ।
अब कहाँ–कहाँ आगो लाग्छ मलाई थाहा छैन । आन्दोलनले साम्प्रदायिक रूप लिन्छ या लिन्न भन्ने पनि बताउन सक्दिनँ । तर, यसले विखण्डनको रूप लिन्छ कि भन्ने ठूलो डर छ । यहाँ बौद्धिक वर्गले तिमीहरू संघीयताका लागि कतिचोटि मान्छे मार्ने अवस्था सिर्जना गर्छौ, मर्ने नै हो भने देशैका लागि मर भनेको पनि सुन्छु । त्यसकारण मलाई के डर लाग्छ भने उग्र भयो भने त्यतातिर जान पनि सक्छ । तर, नजाओस् भन्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा नेता को हुन्छ भन्ने मैले देखेको छैन । – नयाँ पत्रिका	Read 946 times	Tweet
« उपमेयरको टिकटका लागी काग्रेस भित्र रुपा र्चचा	गिरिजाप्रसादले मधेसवादी दलहरुसँग के सम्झौता गरेका थिए ? (सम्झौता सहित) »